warkii.com » Haweryney 45-jir ah oo isdishay iyadoo ku dayaneysa Sushant Singh Rajput!!
Haweryney 45-jir ah oo isdishay iyadoo ku dayaneysa Sushant Singh Rajput!!
Warar kasoo baxayaan Mumbai Mirror waxay sheegayaan in haweeyney lagu magacaabo Rachna Seth oo 45-jir ahed is dishay taariikhda marke ku beegned 1-july 2020 sabab la xiriirta mudo bil kudhowaad inee murugeysned sidaasna isku dishay maadama murugada xamili weysay.
Rachna waxay qoyskeeda sheegeyn inee ka luntay lacag ay Bank dhigatay kadibna Bank ayaa qasaaro iyo jab weyn la kulmah waxuuna lumiyay lacago fara badan oo uu dad u hayey dadkaas Rachna ayaa kamid ahed hadaba lacagtii ay weysay ama ka qasaartay ayee la murugeysned mudo bil kudhowaad.
Arinka murugadeeda waxaa sii siyaadiyay geerida Sushant oo marna la laha wuu si dilay marna waa la dilay hadaba iyadoo kudayaneyso ficilkii Sushant guriga ayee hoosta ka xiratay weyna is dishay waxaase la hubaa ineysan taageere u ahaan jirin Sushant balse ficilkiisa kudayatay.
Dhanka kale ilaa hada makala cado in Sushant is dilay iyo in la dilay dadka badankiisa waxay aaminsanyihiin in la dilay walow booliska iyo dadka qaar kale aaminsan yihiin inuu is dilay waa marka la tixraaco xogta booliska gabadhaana waxay kamid ahed dadkii aaminsanaa in Sushant is dilay iyadana wey si dishay iyadoo ku dayaneyso.